REPUBLICADAINIK | दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले व्यक्तिका जग्गा कब्जा गर्ने - REPUBLICADAINIK
दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले व्यक्तिका जग्गा कब्जा गर्ने
काठमाडौं । दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानूनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी शुरू गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानूनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेको छ ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।
व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।
अख्तियारले २०७३ सालमा मुलुकभर रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको हो ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसित छैन ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन् । उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानूनी हुन्छ ।
विधेयकमा उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरेको जग्गासमेत जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
जग्गा उपयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मुलुकभरका भूमि व्यवस्थासम्बन्धी काम हेर्ने कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत जफत गरी सरकारका नाममाल्याउने भएको छ । अख्तियारले तयार पारेको विवरणअनुसार गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दाबढी जग्गा राखेका व्यक्तिहरूमध्ये धेरैजसोले बेचिसकेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गावाला परिवार छुट्टिएको, जग्गा बेचिसकेको, नापीको मोठमा जनिएको तर दर्ता हुन बाँकीजस्ता चार प्रकारको विवरण अख्तियारले तयार गरेको छ ।
चार प्रकृतिमा रहेकाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको व्यक्ति या परिवारको संख्या कति छ यकिन भन्न सकिने अवस्था नरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारले ०७३ सालमा गैरकानूनी रूपमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन रिपोर्ट तयार गरेको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति या परिवारले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी, भित्री मधेस र तराईमा १० बिघा मात्र जग्गा राख्न पाउँछन् ।
व्यक्ति या परिवारले घरबारीका लागि उपत्यका र पहाडमा ५र५ रोपनी तथा भित्री मधेस र तराईमा एक बिघा जग्गा थप राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी या संस्थाले पनि एक व्यक्ति या परिवार बराबरमात्रजग्गा राख्न पाउँछन् ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार ०७२ सालअघि नै ३८ जिल्लाका व्यक्ति या परिवारका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई वितरण गरिसकेको छ ।
बाँकी ३७ जिल्लामा मात्र व्यक्ति या परिवारसित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
जग्गाको सबभन्दा बढी महँगो मूल्य पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी २८ सय ६४ रोपनी जग्गा भेटिएको छ । भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा काठमाडौंमा २३ सय २४, ललितपुरमा ४० र भक्तपुरमा ५ सय रोपनी छ ।
तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा २२ सय बिघाभन्दा बढी भेटिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा झापामा ३ सय ८२, रूपन्देहीमा २ सय ८८, मोरङमा २ सय ३९, सप्तरीमा १ सय ३३, नवलपरासीमा १ सय ३०, कपिलवस्तुमा १ सय ७३, दाङमा १ सय ३१, बाँकेमा १ सय ५०, बर्दियामा २ सय ५३, सुनसरीमा ४८, सिरहामा ७६, रौतहटमा ८०, पर्सामा ११ बिघा, बारामा ३१, भित्री मधेसका उदयपुर र सिन्धुलीमा एकरएक बिघा छ ।
सर्लाहीमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीले मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पूर्ण कागजात नष्ट भएकाले त्यो जिल्लाको भूमिको विवरण पाउन नसकिएको जानकारी विभाग स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार पहिला नै सरकारले सुकुम्बासीलाई बाँडिसकेका चितवन, कैलाली, महोत्तरी र कञ्चनपुरमा भने हदभन्दा बढी व्यक्तिगत जग्गा छैन ।
Published : Sunday, 2019 August 11, 8:15 am
सिड्नी विमानस्थलमा दुई नेपाली पक्राउ
कम्युनिस्ट सरकारले जनताको भावनाको कदर गर्न सकेनन्ः देउवा
कम्युनिस्टलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन कांग्रेसलाई जिताउनुस्ः पौडेल
सर्लाहीमा वडाध्यक्षलाई भोट माग्दै कांग्रेसका सांसद सिंह
प्याजका कारण कम्युनिस्ट सरकारलाई तनाव
कांग्रेसले अर्को पटक ललितपुर कब्जा गर्छ, जति गर्छौ अहिले गरः मीनकृष्ण महर्जन
वीपी र रामहरिको नजरमा गणेशमान सिंह
हामी आफै बदलिनु पर्छ
नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन्छ कसरी ?
एआरएनएमा मिलेर जाने वातावरण बनोस्
नेपाल प्रहरीमा किन चलाइन्छ आईजीपी हट्ने हल्ला ?
© 2017 - 2019 republicadainik.com सर्वाधिकार सुरक्षित Developed By: Saipal Technologies